I-Greta Thunberg I-UN intetho isikhumbuza "iintsana ezilahliweyo zi-incubators" Imfazwe yase-Iraq: UMartin Vrijland
DIRECT (ngaphandle kwe-PayPal)
I-Greta Thunberg I-UN intetho isikhumbuza "iintsana ezilahliweyo ngaphandle kwentetho" ye-Iraq
Kufakwe kuyo Ukupheliswa Ukupheliswa, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-24 Septemba 2019	• 20 Comments
Nabani na ongayiboniyo ukuba i-Greta Thunberg ngumlingisi nje wentengiso ohleli kakuhle, uhlala kancinci kakhulu enentloko yakhe entlabathini. Ndiyamangaliswa kukubona imiyalezo eku-Facebook evela kubantu abangabalandeli beli bhinqa liselula kwaye baqinisekile ukuba yintshatsheli eyiyo enokuthi ihambe kwilizwe lonke kwaye yenziwe yonke into. Kuba basilwela ukuthatha isigqibo ngakumbi kwezopolitiko ukusindisa imozulu. Incoko ye-UN yeemvakalelo (apho uDonald Trump ebengayi kubakho, kodwa ngequbuliso abonakalise) yikhrimu kwidesika ebambeleyo.
Le propaganda intle ijikeleza kwinto enye kuphela kwaye yile: Ukunxibelelanisa uphawu lokwenziwa kwamaphiko alungileyo ngakwicala lokulwa nehlabathi, ukucinga ngetyala, ithiyori yobushushu beli lizwe, ubuzwe, ukungathandani kwabasetyhini kunye nezobupolitika zokuzithengisa kuqala; ukuvuselela uqoqosho kamva, ukuze uphawu lwephiko lasekunene lonyulwe njengeqela elinetyala ngabantu bonke ukuze bajongane naluphi na uhlobo lokugxekwa kakhulu kwaye lubonakale. U-Greta Thunberg yinxalenye yaloo mdlalo wokusasaza. Kuya kufuneka idlale nabantu kwiimvakalelo zabo zesisu, ukuze babathiye abo 'baphiko-balapha' bayikhathaza (abangafuni kubambelela kwisivumelwano sezulu se2015 Paris)! Imasisi kufuneka ibathiye abagxeki.
Incoko ye-UN eyenziwe ngu-Greta Thunberg yasikhumbuza kwangoko umdlalo odlalayo weemvakalelo zabantu kwi-10 ka-Okthobha u-1990, xa intombazana esencinci yase-Iraq yeza kwi-American Congress ukuxelela i-American Congress ngendlela yolawulo lukaSaddam Hussein, iintsana. bebiwe bubushushu kwimigangatho yesibhedlele. Ukuba ufuna ukuchukumisa abantu, kungcono ukwenza oko ngokusebenzisa inenekazi eliselula elinemvakalelo elinika ubungqina. Ngokukhethekileyo intombazana ephantse yabadala, kuba loo nto inomdla kakhulu ekucabangeni. Kule meko, iminyaka embalwa kamva, lo Nayirah wayeyintombi yenxusa laseKuwait eUnited States. Ngamafutshane: yayisesona senzo sakho sinyulu. Isenzo siphela sokuseka samiselwa yiarhente yentengiso INtaba neKnowlton.
Nokuba ungaxoka kangakanani, (ewe, kuba 'izixhobo zentshabalalo' ku boniswe- Ubuxoki), abantu abaninzi bayaqhubeka belandela ngobuchule iindlela zokusasaza iindaba.
Jonga la manenekazi mabini kwimifanekiso bhanyabhanya engezantsi. Zombini ziphoswe kakuhle. Zombini isenzo esihle. Yiyo ke le into esiyibiza ngokuba sisidenge! Injongo inokucaca kuwe. Ndishwankathela elinye ixesha lakho. UDonald Trump, umxhasi weBrexit kunye nawo onke amaqela anendawo elungileyo (ii-pawns ezilawulwayo) kuye kwafuneka akhe igama 'lasekunene' ('iphiko lasekunene' ngesiNgesi) kumxhasi omkhulu. Uqoqosho luya kuqhushumba kwaye wonke umntu uya kwalatha iminwe yabo kwiqela elikhulu leesuti zokuphazamiseka. Elo qela elalingafuni kwenza nto ngemozulu ukuba kunyanzelekile; Ngaphandle kweminxeba enjalo eneemvakalelo evela kwisizukulwana esitsha (ethi, emva kwakho konke, ilumke ngakumbi kunaleyo yingcuka yemali endala). Esi sisicwangciso sobuchule esikhethwe ngobuchule. Yinyani. Kuluqhinga ukujongana ngokuthe ngqo nalo lonke uhlobo lokugxeka kwindlela yendlela eya kuluntu jikelele.
Ngaba oko kuthetha ukuba abo bantu basekunene abafuni kwenza nantoni na ngemozulu? Hayi, oko kukhuselwa okuchasene nemozulu kuhambelana ngabom nokuhamba kwephiko laseburhulumenteni ngalolu hlobo lwenkohliso, ukuze ungayithandi into eyakhiwe ngononophelo. Wonke umntu oqinisekileyo unxulunyaniswa 'naphiko-luphawu' lophawu. Kwaye kusebenza kakuhle! Imasisi iyacaphuka! Kanye njengabo kunye neentsana ezazilahlwe ngaphandle kwee-incubators e-Iraq. Iindimbane ziqala ukumthiya uTrump kwaye ke abaxhasi bakaTrump kwaye ngoko uphawu lophawu lwasekunene. Nantso ke yayiyinjongo leyo. Ngalo nto, abantu ngexesha elifanayo bengathandi zonke ezo zimvo malunga nokulwa nokudibaniselana, "ukuba i-911 inokuba yayiliqhinga" nokunye okuninzi kolo hlobo lokugxeka i-oda endala emiselweyo. Imvakalelo yakho inxulumene nomsindo wokubamba kuka-Greta Thunberg. Intshutshiso eyi-Smart!
Ukucinga okugwenxa 'akulunganga' ('iphiko lasekunene'). Ichwethezelwe uphawu kwimidiya nakwezopolitiko (abadlali). Yintengiso emsulwa, apho wonke umntu ocinga ngokunzulu ukuba unxulumene nophawu. Bubuxoki obukhulu obu! Oosopolitiki kunye namajelo osasazo ngoomatshini bokusasaza. Lixesha lokuba ekugqibeleni ugqitywe; Ungaze uhambe uye kwindawo yokuvota kwakhona kwaye uthule onke amaphephandaba, umabonwakude nonomathotholo. Rhoxisa ikhebula lakho le-TV, kurhoxisa ukubhaliswa kwephephandaba. Ukhetha ukuxhasa umlo ngokuchasene nokusasaza kunye neendaba ezingezizo ngokuba lilungu lale ndawo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: I-Koreentruth.org
Ingaba umsebenzi weendaba kunye nabalobi beempendulo kwaye bathengisa imisebenzi ye-PsyOp njengoko benzayo ngemiboniso yeTV?
I-NOS kunye ne-RTL zinika ingqalelo epheleleyo kwizibanzi ezinzulu zokufihla imveliso yazo enzulu
I-Deepfakes yintoni na kwaye yinto ede kangakanani?
Ngaba i-911 yayingumsebenzi ongaphakathi? UDe Telegraaf uneempendulo kuyo yonke imibuzo yakho!
Ngaba usisidenge unjalo nawe?
tags: 2015, UDonald, ngokweemvakalelo, eziziimbalasane, Greta, Gretha, melwano se mozulu, EParis, intetho, Thunberg, ngexilongo, un, vn
Willem S wabhala wathi:
24 Septemba 2019 kwi-08: 39
Lo mntwana woyikisayo yiTrekpop ye-Elas Fascist Elite.
Wonke umntu makabona ukuba eli nani i-100 yi-% Fake, uphumile kwiidepho.
24 Septemba 2019 kwi-08: 55
“Urhulumente kufuneka abhengeze umntwana njengobona buncwane buxabisekileyo ebantwini. "Lo gama urhulumente esaziwa ukuba usebenzela ukusebenzela abantwana, abantu bayakunyamezela ngovuyo phantse nakuphi na ukuncitshiswa okanye inkululeko kwaye phantse nakuphi na ukusilela." -Adolf Hitler.
24 Septemba 2019 kwi-10: 57
Owona mbono mkhulu:
Phantsi kwevidiyo ye-YT
Msgstr "" "Isiseko
Iiyure ze-5 ezedlule (zihleliwe)
Ngenxa yokulunga umntu uthenga iponi okanye inja. ”
Ewe uyayazi, nani ninabazali abavumela abantwana babo ukuba benze imiboniso kunye noPaul de Leeuw, bayibize ngegama elithi beetje ngegama, bahlukumeze umntwana.
24 Septemba 2019 kwi-11: 33
Andiyikhupheli ngaphandle ukuba i-Greta, ukuba ngaba iyintombazana, iqhubile ngenkqubo ye-Monarch ...
24 Septemba 2019 kwi-11: 58
Ndiyazi i-99,9% ngokuqinisekileyo
SandinG wabhala wathi:
24 Septemba 2019 kwi-12: 07
uzibona zibhabha ngokoqobo kwi-2: 47, zonke nje ezo mpawu zeplashini xa ene-mic esandleni sakhe ezingalunganga ncam. I-talmon tart!
24 Septemba 2019 kwi-18: 19
Kwaye ke lo mbuzo ulandelayo uthathwe ngumntu nge-imeyile kwiphepha lam le-Facebook:
“Molo, kutheni kungenjalo inqaku malunga neGreta Thunberg? Kulula ukwenza unxibelelwano kunye naye kunye noSenee Arrhenius kunye nomsebenzi wakhe kwiziphumo zokugcina ukushisa okanye iZiko likaNobel (Alfred Nobel) Okanye igama uCarl Peter Thunberg, freemason? Kunzima ukufumana nantoni na ngayo.
Okanye uLuisa-Marie Neubauer kunye neSiseko esinye esixhaswe nguBill Gates noGeorge Soros
Uqhwithela lwemozulu ngolwesiHlanu (ngolwesiHlanu wexesha elizayo) FFF 666 nje nge-'Reichsparteitag '”
"Kungenxa yokuba loo nto iya kuthathwa kuphela njengenye ithiyori yethiyori. Ndicacisile injongo yokuphehlelelwa kweli nenekazi (mhlawumbi ngequbuliso lenkwenkwe) kwinqaku lam. "
Ingacace gca ukuba amacebiso acacileyo akhiwe kwimisebenzi enjalo ye-PsyOp, eyenzelwe ukuthumela abagxeki 'indlela yokukhangela' emiselwe kwangaphambili ngokucacileyo.
Asithathi nxaxheba okomzuzwana. Ndimi endaweni yokujonga uhlobo lwegama 'lasekunene' ('-phiko lasekunene') nendima yombutho wamarionette Thunberg ukugxeka eli qela (kunye nehlazo elakhiwe kakuhle).
24 Septemba 2019 kwi-18: 21
Kwaye ewe, ufunda elo lungelo: "mhlawumbi ngequbuliso inkwenkwe".
Nditsho kuba uninzi lweenkqubo ze-PsyOp ziqulathe ungqimba olongezelelweyo. Ndiyarhanela ukuba i-Greta iya kuphinda isebenze kwi-ajenda ye-transgender.
Leila Honig wabhala wathi:
24 Septemba 2019 kwi-18: 38
de.voet clinic@telenet.be wabhala wathi:
24 Septemba 2019 kwi-20: 36
Idemon okanye kufuneka ndinomntwana ophazamiseke ngokwengqondo uye wabonakalisa ubuso bakhe bokwenyani obugcwele intiyo kunye nokungonwabisi kuba umhlaba awunakulawulwa ngokuthe ngqo. Oko akuthethayo malunga nobuntwana bakhe obulahlekileyo kunye nokufikisa kubonisa ngokucacileyo ukuba akangeneki kwaye ubanjiswe kukukhohlisa kwakhe. Le meko ngoku imkhathaza kangangokuba angabe esakwazi ukucinga ngocwangco. Ukuvumela lo mntwana ukuba enze enkundleni ngaphandle kwesikhokelo esifanelekileyo kubulala ubomi bakhe ngenkolelo eqinisekileyo yokuba uza kufa. Ndibabambe bonke bezopolitiko, abazali kunye namajelo eendaba anoxanduva loku. Uqikelelo olunjalo luye lwaphononongwa kaninzi. Imvula ye-acid, iAl Gore, njl njl Iqela laseRoma, lelinye lamaqela emigulukudu enkulu, lisungula imeko entsha yeminyaka yonke emva kokuba abezopolitiko besebenza ngenkuthalo ukuze bancame abantu abaqhelekileyo.
24 Septemba 2019 kwi-20: 40
Uyinika ixabiso elincinci kakhulu kunoluvo lwam. Intombazana isebenza ngokwabelwe.
25 Septemba 2019 kwi-02: 03
enye i-clown apha, iza i-ff ngeplanethi yokuthetha malunga nokukhutshelwa kwe-CO2 e-Amsterdam. Ngaba ingqungquthela ngevidiyo yayingesiso isisombululo? Yintoni i-hoot .. 😀
25 Septemba 2019 kwi-10: 57
jonga abafundi bakhe kumzuzu yena Woodpecker, omkhulu njengeesosi kubonakala ngathi kungenxa yokukhanya.
25 Septemba 2019 kwi-16: 34
Ukwenza isenzo kuhlawula abantu abathandekayo
U-Greta Thunberg uzuze i- "83,000 ye-" enye ibhaso leNobel '' yokuvuselela iimfuno zepolitiki zokuthatha inyathelo lemozulu '
25 Septemba 2019 kwi-23: 13
Ewe, akukho kunqongophala kwabadlali, iikhredithi zamahhala kwaye ubamba into ecaleni. I-Soros kunye nee-NGOs zayo ziya kuba zixakekile zifuna ukubambisa kwaye zidlulise imali.
Caesar Caesar Cachet wabhala wathi:
26 Septemba 2019 kwi-09: 12
Kungokwemvelo ukuba umntu "oqhelekileyo" aphelelwe lithemba. Umkhosi wamaSatana weembambo, abadlali, oosopolitiki kunye nabanye babasebenzi besiFanekiso awunakuphikwa. Umxholo wam uthi: Funda ukuba zigzag kobu bomi kufuneka uqhubeke ebomini ngenxa yesizathu esithile. Lala i-idiots kwaye ulumkise abantwana bakho!
26 Septemba 2019 kwi-11: 27
Ndivuma ngokupheleleyo! Ingakumbi eyokugqibela, isilumkiso
Sjon wabhala wathi:
28 Septemba 2019 kwi-17: 34
Iyayicaphukisa indlela asetyenziswa ngayo lo mntwana kwiindaba zemozulu. Malunga ne-80 yeminyaka eyadlulayo sasinomakhelwane amadevu owasebenzisa nabantwana ngeenjongo zokusasaza ...
29 Septemba 2019 kwi-23: 09
I-X 4 yezigidi ze-yacht apho uGreta wakhwela inqanawa waya e-USA, yayiyi-yacht yosapho lakwaRothschild, eyidlulisela kwi-tycoon yaseJamani Gerhard Senft. UPierre Casiraghi, umzukulwana okanye inkosazana yangaphambilini yaseMonaco uRainier III kunye nomdlali weqonga uGrace Kelly babelisekela olo hambo.
30 Septemba 2019 kwi-09: 51
iqhinga lakudala elisasebenza
« Yintoni eyinyani malunga nokubulawa kukaDerk Wstersum kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?
"Inyani njengoko siyibona" ​​incwadi uMartin Vrijland ngoku ikhoyo »
Abavakatye ngoJulayi 2017
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.083.360
I-PsyOp ye-ghost 'yokusebenza kwengqondo': ukuthatha amalungelo akho kunye nokwazisa 'ngamapolisa engqondo'
Uqhanqalazo lwamaFama: Amafama anikela ingqalelo ukuba iinkokheli zakho zoqhanqalazo azingobameli bakaRhulumente
URuinerwold Drenthe kunye nosapho lwakhe, ukusebenza kwengqondo elandelayo (PsyOp) ukuya kwisimo samapolisa ngaphezulu
Ukuvukela okuphelileyo kunye nokubiza iirhafu eziphezulu kunye nolawulo olupheleleyo kuzo zonke iinkcukacha zobomi bakho
Umlawuli weMvukelo yokuGqibela uMargaret Klein Salamon: "Inqanaba elilandelayo kukuthatha inyani ukuba yinyani"
Hare op I-PsyOp ye-ghost 'yokusebenza kwengqondo': ukuthatha amalungelo akho kunye nokwazisa 'ngamapolisa engqondo'
Ikhamera 2 op Kutheni le nto i-transgender iba yinto eqhelekileyo kule nkulungwane ye-21 kwaye inyani inyamalala
guppy op I-PsyOp ye-ghost 'yokusebenza kwengqondo': ukuthatha amalungelo akho kunye nokwazisa 'ngamapolisa engqondo'
SalmonInClick op I-PsyOp ye-ghost 'yokusebenza kwengqondo': ukuthatha amalungelo akho kunye nokwazisa 'ngamapolisa engqondo'
UMartin Vrijland op I-PsyOp ye-ghost 'yokusebenza kwengqondo': ukuthatha amalungelo akho kunye nokwazisa 'ngamapolisa engqondo'
Uhlaziyo lwemihla ngemihla nge-imeyile
Joyina amanye ama-1.649 ababhalisile
© 2019 uMartin Vrijland. Wonke amalungelo agcinwe. Umxholo nguSolostream.